In laga macaasho dadka shaqa-la’aanta ah oo laga biya-diidey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
In laga macaasho dadka shaqa-la’aanta ah oo laga biya-diidey
Sawirle: Annika af Klercker/Scanpix
Guddoomiyaha guddi-hawleedka baarlamaanka u qaabbilsan arrimaha shaqada Elisabeth Svantesson (Mooderaat) ayaa si kulul uga carootay barnaamijkii baaritaanka ahaa ee SVT oo ka hadlayey in shirkaduhu malaayiin karoon oo macaash ah ka sameeya dadka shaqa-la’aanta ah oo loogu soo diro in ay caawinaan.
– Waa wax laga argagaxo in shirkado badani ay khiyaamo ku qaataan lacagta canshuurta oo dadka ka wada-dhexeysa. Waana wax aan marnaba la aqbali karin!
Svantesson waxay ka carootay hadalladii ka markhaanti kacayey in aan dadka wax tayo leh loo qaban iyo in lagu qaato macaash aad u sarreeya.
–Anigu kama soo horjeedo in shirkaduhu macaash sameeyaan laakiin marka ay sameeyaan macaash sidaas u sarreeya su’aal ayaa la isweyddiin karaa: shuruudo ma ku xirnay waxa ay noo qabanayaan? Mase jiraa hannaan iyo heer sax ah lagu siiyo lacagaha ay ku qaataan waxqabadkooda? Waxay noogu muuqataa wax aan caqligal ahayn.
Waxay qabtaa in dhibaatada ugu weyni tahay in daldaloolo ku jiraan hawlaha xafiiska shaqadu qabto oo ay ka mid yihiin qandaraas-bixinta, habka loo qoro heshiisyada iyo sidii loo dabageli lahaa waxqabadka shirkadaha.
– Habka aan wax ku kontaroolno waa in uu noqdaa in aan ku kalsoonaan karo in uu abuurayo waxqabad tayo leh oo wax-ku-ool ah.
– Arrintani waa wax aan sina loo aqbali karin. Waaana in aan sidaas ka sii wanaajinnaa!